China Poultry Netting Hot Dipped Galvanized ho an'ny orinasa Chicken Runs | Tian Yilong
Fitaovana akoho amam-borona amam-borona mafana natetika ho an'ny hazakazaka akoho
Hex Netting dia fantatra amin'ny anarana hoe Chicken Wire (na Poultry Wire na Poultry Netting), ary matetika ampiasaina hananganana akoho akoho na fefy hafa ho an'ny akoho na biby hafa. Ankoatry ny fampiasana amin'ny fitaovana fefy na tranom-borona, dia mety ihany koa ho an'ny tetikasa bozaka sy zaridaina ary tetik'asa an-trano hafa.
Pens sy fonosana
Nandrisika alohan'ny fanenomana (GBW)
Hole Size / Wire Dia:
Toe-karena, androm-piainana antonony
tariby akoho mavesatra
2 ′ / 25 ′ Vorona akoho amam-borona mafana - natsoboka 1 nandrisika ”ho an'ny hazakazaka akoho
Galvanized fanamiana 20 gauge, hexagonal tariby harato, miaraka amin'ny fihodinam-bokotra harato.
Nohamafisina tamin'ny tariby marindrano Bee-Line isaky ny 12 ″.
Hita amin'ny haben'nymesh marobe miaraka amin'ny sakany sy habeny lava.
Ny horonana tsirairay avy dia fonosana misaraka.
Ho an'ny fametahana hex maharitra ela dia jereoGalvanized AfterWeave, PVC mifono ary Stainless Steel Nettingproduct.
Fanamarihana:Manolo-kevitra ny hitsaboana ireo harato tariby vaovao ampiasaina amin'ny tranom-biby sy ny vala ary ny voankazo mba hanalana zinc be loatra izay mety hanimba ny biby fiompy. Esory ny tsimatra zinc amin'ny antsy fampiasana. Tokony hosasana amin'ny vinaingitra vita amin'ny vinaingitra ny vera avy eo (kaopy 2 ao anaty rano iray siny), ary hosasana amin'ny rano madio.
Profeessional 1 Inch Galvanized Hexagonal Wire ...
Jirama amam-borona hexagonaly polyster ho an'ny Riv ...
Fampiroboroboana ny ligin'ny fitsarana tenisy, nandrisika A ...
Long Hexagonal Zinc mifono 3000m Chicken Wire N ...
Silvery mafana - Nofonosina akoho nandrisika ...